निर्मला प्रकरणबारे फिल्म बन्दै, कस्तो बन्यो ट्रेलर ? (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
निर्मला प्रकरणबारे फिल्म बन्दै, कस्तो बन्यो ट्रेलर ? (भिडियोसहित)
२०७६, ६ पुष आईतवार
काठमाडौंः बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको वास्तविक कथामा निर्माण भएको फिल्म ‘कोपिला’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
शिवम् अधिकारीको निर्देशन रहेको फिल्म ‘कोपिला’ मा निर्मलाको भूमिका सन्जिवनी खरेलले निर्वाह गरेकी छन् । निर्मलाको हत्याको घटनापछि भएको राजनीतिक चलखेल र निर्मलाको परिवारमा परेको मनोवैज्ञानिक अवस्था कथामा देखाइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस चलचित्र ‘कोपिला’ डिसहोममा प्रर्दशन हुने
सरिता गिरीले आमा र गणेश गिरीले पिताको भूमिका निर्वाह गरेको फिल्ममा ऋद्धिचरण श्रेष्ठ, विमल पौडेल, पुष्प आचार्य, सुशान्त श्रेष्ठ, अस्मिन घिमिरेलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । रामेश्वर कार्कीको छाँयाकन र दीपक शर्माको संगीत रहेको फिल्म नयाँ बर्षमा प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस निर्मला प्रकरणका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर छाड्नेः बाँस्कोटा
ट्याग्स: ‘कोपिला’, निर्मला प्रकरण